Qalabka ugu Fiican Suuqgeynta Emailka Woocommerce | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 26, 2020 Isniin, Janaayo 10, 2022 Sheryl Jones
WooCommerce waa midka ugu caansan uguna doodi kara mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican eCommerce ee loogu talagalay WordPress. Waa qalab bilaash ah oo fudud oo qumman in la dejiyo lana isticmaalo. Shaki la'aan sida ugufiican ee loo leexiyo kanaga WordPress degel dukaanka elektaroonigga ah ee si buuxda u shaqeeya!
Si kastaba ha noqotee, si aad u hesho oo aad u haysato macaamiisha, waxaad u baahan tahay in ka badan dukaanka eCommerce ee adag. Waxaad ubaahantahay xoog istiraatiijiyadda suuqgeynta emailka si loogu hayo macaamiisha oo loogu beddelo iibsadayaal soo noqnoqda. Laakiin maxay dhab ahaan tahay suuq-geynta emailka?
Suuqgeynta emailka waxaa loola jeedaa ficilka gaarsiinta macaamiisha adoo adeegsanaya emayl. Emailku wali wuxuu leeyahay ROI-ga ugu wanaagsan ee kanaal kasta oo suuq geynaya. Dhab ahaan, Ururka Suuqgeynta Tooska ah ayaa sheegaya in iimaylka suuq geynta ROI uu yahay $ 43 doolar kasta oo la qarash gareeyo, taasoo ka dhigaysa kanaalada suuqgeynta ugu wax ku oolka badan ee iibinta wadista.
Suuqgeynta iimaylka waxaa loo adeegsadaa ganacsiga si loo:
Kordhi macaamiisha aan diyaar u ahayn inay wax iibsadaan wali
Iibi macaamiisha u diyaarsan inay wax iibsadaan.
Kor u qaadida alaabada dadka kale (tusaale suuq geyn la shaqeysa)
U kaxee taraafikada boostada / baloog cusub
Waa maxay sababta Woocommerce u tahay Madasha Sare eCommerce:
WooCommerce waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibiyo wax kasta
WooCommerce waa bilaash
Madal lagu kalsoonaan karo oo ammaan ah
Noocyo kaladuwan oo la kala doorto
Deg deg ah & fudud si loo dejiyo
Si lagaaga caawiyo inaad abuurto istiraatiijiyadda suuqgeynta iimaylka ugu fiican, waxaan dooneynaa inaan wadaagno 5-ta ugu sarreysa qalabka suuqgeynta emailka; waxaad u baahan tahay inaad hesho suuqgeynta emaylkaaga. Marka aan bilowno!
5 Qalabka ugu Fiican ee Suuqgeynta Emailka ee Woocommerce
Kani waa qalab loogu talagalay isku xirka boggaaga Mailchimp, mid ka mid ah adeegyada suuqgeynta e-maylka ugu caansan ee la heli karo. Qalabkani wuxuu awood kuu siinayaa inaad dhisto foomam, aad eegto falanqaynta, iyo waxyaabo kaloo badan. Mailchimp waxay siisaa dukaamada e-commerce qalabka loo baahan yahay si looga caawiyo wadista iibka. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad isku xirto macmiilkaaga oo aad amarto xogta si aad u qalabiso howlaha una dirto ololeyaal bartilmaameed ah. Qaybta ugu fiican? Gabi ahaanba waa bilaash! Tilmaamo Muhiimka ah:
Abuur foomam isdiiwaan gelin ah oo ku dar boggaaga WordPress
Ku dhex-dar noocyo kala duwan oo qaab dhisme iyo kumbuyuutarro e-commerce ah
Eeg warbixin faahfaahsan oo ku saabsan ololahaaga
U soo dir ogeysiisyo otomaatig ah markay macaamiishu cusub isdiiwaangeliyaan
Jilt waa madal suuq geyn ah oo dhan oo hal email ah oo loo dhisay baahiyaha dukaamada WooCommerce. Adiga oo kaashanaya barmaamijkan, waxaad diri kartaa joornaalada, ogeysiisyada iibka, emaylka dabagalka otomaatiga ah, rasiidhada, ogeysiisyada, iyo inbadan! Waxaad diirada saari kartaa otomaatiga, qeybta, iyo emaylka macaamilka, dhammaantood adigoon ku bixin tayada qaabeynta. Astaamaha muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Waxay leedahay isdhexgal WooCommerce.
U dir ogeysiiska iibka
Kudar iskutallaab-iibinta iyo ciladaha emayllada.
Qaybta ku saleysan iibsiyada hore iyadoo la adeegsanayo mashiinka kala-sarreynta horumarsan
Ku soo cesho dakhliga emayllada gawaarida laga tagay.
Jaangooyooyinka waxqabadka faahfaahsan ee emayl kasta
Naqshadeeye emayl qurux badan, oo leh modul jiita-iyo-dhibic
Bilow Tijaabadaada Jilt
La-socoshada waa qalab kaa caawin doona inaad si wanaagsan ula macaamisho macaamiishaada adoo abuuraya ololeyaal faleebo adag oo ku saleysan danaha isticmaalaha, iyo iibsashada taariikhda si loo wado iibinta iyo ka-qaybgalka sare, dhammaantoodna leh dadaal yar oo ku saabsan marinnada suuq-geynta badan. Tilmaamo Key waxaa ka mid ah:
Kordhi dabagal ololeyaal
Raad raac qiimaha macaamiisha
Ku soo dir fariimo qoraal ah adiga rajadaada
Falanqeyn faahfaahsan- (furan / qasabno / dir / iwm)
Abuur oo maamul liisaska dirista
Free iyo caadooyinka arrimo
Isku-darka isdhaxgalka Google
Soo Degso Plugin La Soco-Ups
Moosend waa mid ka mid ah suuq-geynta iimaylka ugu xooggan iyo aaladaha suuq-geynta suuq-geynta kuwaas oo kaa caawin doona inaad hagaajiso oo aad otomaatig u sameyso ololayaasha suuqgeynta e-maylkaaga. Naqshadeeda dareenka leh iyo qalooca waxbarasho ee yar ayaa u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay helaan bilow hore, halka tifaftiraha iimaylka Jiid-iyo-Drop iyo qaab-dhismeedka iimaylka si buuxda loo beddeli karo ay ballan qaadayaan inay kor u qaadaan dadaalkaaga.
Tilmaamaha ugu muhiimsan waa:
Tifaftiraha iimaylka Jiid-iyo-Drop ee adag
Maktabad qaab email oo ballaadhan
Kala-saarid iyo ikhtiyaarrada shakhsiyaynta-laysarka-la beegsado
Cuntooyinka otomaatiga ah oo diyaarsan, si buuxda loo beddeli karo
Bogga soo degista iyo foomamka is-diiwaangelinta ayaa ka muuqda
100+ isdhexgalka oo laga dooran karo
Ku hel Moosend bilaash
Omnisend waa aaladda ugu fiican ee loogu talagalay naqshadeynta emaylka elektaroonigga ah ee elektiroonigga ah iyo gacanta. Waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso ganacsiyada eCommerce inay suuq geyntooda la xiriiraan iyagoo u diraya farriimo shaqsiyeed qofka saxda ah, waqtiga saxda ah, iyagoo isticmaalaya kanaalka saxda ah. Muuqaalka jiidan-iyo-dhibic ayaa isku dubbaridaya alaabtaada waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku dhejiso macluumaadka alaabta joornaaladaada iyo ololayaasha otomatiga. Astaamaha muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Waxay leedahay isdhexgalka WooCommerce.
Isku dar SMS, ogeysiisyada riixista websaydhka, Facebook Messenger, iyo qaar kaloo badan oo ku saabsan isku darka suuqgeyntaada
U dir farriinta saxda ah ee u socota macaamiisha saxda ah waqtiga saxda ah, wakhti kasta adoo adeegsanaya otomaatiga.
Abuur qaybo jilicsan oo ku saleysan shuruudahaaga
Waad isku xiri kartaa xiriirada ka jira keydka keydka WordPress.
Abuur bogag deg deg ah iyo popups si fudud.
Lasoco waxqabadka iibka iyada oo loo marayo wadiiqooyin kala duwan
Bilow Tijaabadaada Omnisend
Mailpoet waa aalad si aad ah loo qiyaasi karo oo leh noocyo bilaash ah iyo kuwo qiimo leh. Waa horudhac horudhac ah WordPress suuqgeynta suuqgeynta ee kuu oggolaaneysa inaad wax walba ka saxdo dashboardkaaga WordPress. MailPoet waxay sheeganeysaa inay dirto emayllo qurux badan oo gaara sanduuqyada markasta isla markaana abuura macaamiil daacad ah. Barxada waxaa loogu talagalay milkiilayaasha goobta mashquulka badan, ka caawinta inay ku bilaabaan daqiiqado. Astaamaha muhiimka ah waxaa ka mid ah:
MailPoet wuxuu leeyahay plugin toos ah WordPress.
Waad abuuri kartaa foomka rukunka, oo aad ku dhejin kartaa meel kasta oo aad jeceshahay bartaada.
Ka samee e-mayl mid ka soo xoq ama adoo isticmaalaya noocyo kala duwan oo arrimo ah
Samee liisaska macaamiisha kala duwan, oo aad ku maamusho gudaha WordPress
U dir ogeysiisyo saxeex otomaatig ah oo soo dhaweyso emayllada.
Saxeex u noqo MailPoet
Iyadoo la adeegsanayo qalabka suuqgeynta emailka saxda ah iyo fiilooyinka, waxaad si fudud ugu maamuli kartaa dhammaan dhinacyada suuqgeynta emailka tooska ah ee dhismaha foomka rukunka, abuurista emaylka, maareynta liistada, raadinta falanqaynta, iyo in ka badan - oo sax ah boggaaga WordPress. Abuuritaanka iyo maaraynta emayllada otomaatigga ah weligood ma fududaan, iyada oo ay ugu wacan tahay qalabka kor lagu soo sheegay. Tijaabi qalabka, fiiri astaamahooda iyo qorshooyinka qiimeynta ka hor intaadan xulan qalabka kugu habboon.
Waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato koox khubaro WordPress ah oo ka socda hay'ado lagu kalsoon yahay sida Uplers yaa fahmi kara kakanaanta ganacsiga internetka. Waxay kaa caawin karaan inaad dhisto dukaankaaga eCommerce ee gaarka ah iyo sidoo kale inay kaa caawiyaan inaad dhexgasho dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah iimaylka suuqgeynta.
Bixinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkan.
Tags: ururka suuq geynta tooska ahecommerceemaylka e-commercehannaanka ganacsigaisdhexgalka emaylkaEmail Marketingiimayl roidabagaldir emailmailchimpBoostadaomnisendwoocommerce
Sheryl waa Khabiirka Sr ee Suuq geynta Uplers oo khibrad weyn u leh nashqadeynta safarada isticmaale ee sifiican loo qeexay ee ku dhexyaal suuqyada dhijitaalka ah. Waxay ka faa'iideysaneysaa khibradeeda suuqgeynta dijitaalka ah si ay uga caawiso ganacsiyada inay soo saaraan ROIs muhiim ah.
Sidee Iyo Sababta Loo Diiwaangaliyo Cinwaanka Email Qaybinta ee loogu talagalay Koontada Google ee Shirkadeed